Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zeMpilo » Iindaba ezingxamisekileyo ze-Omicron: UJohnson & Johnson banokwenza iPfizer kunye neModerna isebenze ngakumbi
Iindaba zeMpilo • iindaba
I-Johnson & Johnson COVID-19 Booster, iLawulwe kwiinyanga ezintandathu emva kwe-Dose yedosi eMibini ye-BNT162b2, ibonisa ukonyuka okukhulu kwe-Antibody kunye neeMpendulo ze-T-cell.
UJohnson & Johnson (i-NYSE: i-JNJ) (iNkampani) namhlanje ibhengeze iziphumo zokuqala ezivela kwisifundo esizimeleyo, kubandakanywa i-subset yabathathi-nxaxheba kwi-COV2008 exhaswa nguJanssen, eyenziwa nguDan Barouch, MD, Ph.D., et al. ye-Beth Israel Deaconess Medical Centre (BIDMC), ebonise ukuba isitofu sokugonya i-Johnson & Johnson COVID-19 (Ad26.COV2.S), elawulwa kwiinyanga ezintandathu emva kwerejimeni yeedosi ezimbini eziphambili ze-BNT162b2, zonyuse omabini amajoni omzimba. kunye neempendulo ze-T-cell. Ezi ziphumo zibonisa iingenelo ezinokubakho zokunyusa i-heterologous (ukuxuba kunye nokudibanisa). Inqaku elichaza ezi ziphumo liposiwe I-MedRxiv.
"Kukho ubungqina bokuqala bokucebisa ukuba indlela yokudibanisa kunye nomdlalo yokukhuthaza inokubonelela abantu ngeempendulo ezahlukeneyo zokuzikhusela kwi-COVID-19 kunendlela yokukhulisa i-homologous," utshilo uDan Barouch, MD, Ph.D., uMlawuli weZiko Uphando lweVirology kunye noGonyo kwi-BIDMC. “Kolu phononongo lokuqala, xa idosi ye-booster ye-Ad26.COV2.S yanikwa abantu kwiinyanga ezintandathu emva kwerejimeni yokuqala kunye nogonyo lwe-BNT162b2, kubekho ukonyuka okuthelekisayo kweempendulo ze-antibody kwiveki yesine emva konyuso kunye nokwanda okukhulu Iimpendulo zeCD8+ T-cell ezine-Ad26.COV2.S xa zithelekiswa ne-BNT162b2.
"Ezi ziphumo zibonelela ngolwazi oluxabisekileyo lwesayensi yesitofu sethu sokugonya xa sisetyenziswa njengomxube kunye nomdlalo we-booster kwaye sinokunceda ukwazisa izicwangciso zokuphucula ngenjongo yokuphelisa ubhubhane," utshilo uMathai Mammen, MD, Ph.D., iNtloko yeGlobal, uJanssen. UPhando noPhuhliso, uJohnson & Johnson. "Ezi datha zongeza kubungqina obukhulayo obubonisa ukuba idosi yokuxuba kunye nomdlalo we-booster yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 sonyusa ngempumelelo iimpendulo ezihlekisayo kunye neempendulo zeselula ngokuchasene nohlobo lokuqala lwe-SARS-CoV-2, kunye iintlobo ezahlukeneyo zeBeta kunye neDelta.
Idatha yeSigaba sesi-2 iqiniswe ziziphumo zokuqala ezivela kwi-UK COV-BOOST yophando lwezonyango olupapashwe Lancet, ebonise ukuba ukulandela ugonyo olusisiseko kunye needosi ezimbini ze-BNT162b2 (n=106) okanye i-ChAdOx1 nCov-19 (n=108), idosi eyomelezayo yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 zonyuse zombini ii-antibody kunye nee-T-cell iimpendulo.
Iimpendulo zeSelula (T-Cell).
n kolu phononongo lokuqala, ukomeleza ngesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 emva kwerejimeni yesitofu sokugonya sokuqala se-BNT162b2 kubonakala kukhokelela ekonyukeni okukhulu kweempendulo ze-CD8+ T-cell kunokonyusa nge-BNT162b2. Ezi datha zempendulo ze-T-cell zicebisa umahluko phakathi kweempendulo zokhuselo lomzimba ezilandela ukonyuswa kwe-homologous nge-BNT162b2, kunye nokudibanisa-nomdlalo wonyuso kunye nesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 kulandela irejimeni yokuqala ye-BNT162b2.
Ugonyo lukaJohnson & Johnson lwe-COVID-19 luxhathisa i-AdVac kaJanssen® itekhnoloji kunye ne-cell-mediated immunity, kubandakanywa iimpendulo ze-CD4+ kunye ne-CD8+. Iiseli ze-T zinokujolisa kwaye zitshabalalise iiseli ezosulelwe yintsholongwane ebangela i-COVID-19. Ngokukodwa, ii-CD8+ T-cells zinokutshabalalisa ngokuthe ngqo iiseli ezosulelekileyo kwaye zincediswa zii-CD4+ T-cells.
Iimpendulo ezihlekisayo (Antibody).
Zombini isitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 kunye ne-BNT162b2 njengezikhuthazi ezikhokelele kumanqanaba afanayo okungathathi hlangothi kunye nokubopha i-antibody ngokuchasene nohlobo lokuqala lwe-SARS-CoV-2, kunye nokwahluka kweDelta kunye neBeta, iiveki ezine ezilandela ukonyuswa. Nangona kunjalo, emva kwedosi yokuxuba kunye nomdlalo we-booster yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19, amajoni omzimba aqhubekile nokunyuka kangangeeveki ezine ngelixa kubantu abafumene ukongezwa kwe-homologous ngesitofu sokugonya se-BNT162b2, amajoni omzimba anqabile ukusuka kwiveki yesibini ukuya kwiveki. ezine post-unyuso.
Izilwa-buhlungu ezingathathi hlangothi ziyakwazi ukubophelela kwintsholongwane ngendlela ethintela usulelo kwaye ivalele intsholongwane kwindlela yokuphefumula ephezulu. Izilwa-buhlungu ezibophelelayo zinokubophelela kwiprotein ye-virus' spike kwaye yenze intsholongwane ingasebenzi ngokungasebenziyo kwe-antiviral engasebenziyo.
Kolu phononongo, i-biorepository yomzekelo e-Beth Israel Deaconess Medical Centre (BIDMC) ifumene iisampulu kubantu abafumene isitofu sokugonya se-BNT162b2. Abathathi-nxaxheba baqhubeka nokulandela kwi-biorepository kwaye bonyuswa nge-30 ug BNT162b2 (n = 24) okanye babhalise kwisifundo se-COV2008 (NCT04999111) kwaye bonyuswa nge-5, 2.5, okanye i-1 × 1010 vp yesitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 (n=41). Uphononongo lwe-COV2008 luvavanyo lwezonyango lukaJohnson & Johnson, oluqhubekayo, olumfamekileyo lweSigaba sesi-2 (VAC31518COV2008) ukuvavanya isitofu sokugonya se-COVID-19 njengento ekhuthazayo kubantu abadala abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu.
IKomiti yeeNgcebiso yamaZiko oLawulo lweSifo ase-US (CDC) kwiZiqhelo zoGonyo (ACIP) iphakamise isitofu sokugonya sikaJohnson & Johnson COVID-19 njengento ekhuthazayo kubo bonke abantu abafanelekileyo abaneminyaka eyi-18 nangaphezulu abafumana isitofu esigunyazisiweyo se-COVID-19.
UJohnson & Johnson uyaqhubeka nokuhambisa idatha efanelekileyo kwabanye abalawuli, uMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) kunye namaQela eeNgcebiso zobuGcisa bokugonywa kweSizwe (i-NITAGs) kwihlabathi jikelele ukwazisa ukuthathwa kwezigqibo malunga nezicwangciso zokulawula isitofu sendawo, njengoko kufuneka.
Ngentsebenziswano namaqela ezemfundo eMzantsi Afrika nakwihlabathi liphela, iNkampani ibivavanya ukusebenza kogonyo lwayo lwe-COVID-19 kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo, ngoku kuquka nolutsha olusasazeka ngokukhawuleza. Ukwahluka kwe-Omicron. Ukongeza, iNkampani ilandela isitofu sokugonya esikhethekileyo se-Omicron kwaye iya kuqhubela phambili njengoko kufuneka.
Ngolwazi oluthe kratya malunga neenkampani ngeendlela ezininzi zokunceda ukulwa ubhubhane, ndwendwela: www.jnj.com/covid-19.
Ugonyo lukaJohnson & Johnson COVID-19, olukwabizwa ngokuba yiJanssen COVID-19 Vaccine, lugunyaziswe ukuba lusetyenziswe phantsi koGunyaziso lokuSebenzisa oluNgxamisekileyo (EUA) kugonyo olusebenzayo lokuthintela isifo se-coronavirus sika-2019 (COVID-19) esibangelwa kukuphefumla okuqatha. isifo se-coronavirus 2 (SARS-CoV-2).
Ugonyo olusisiseko lwerejimeni yogonyo lwe-Janssen COVID-19 yidosi enye (0.5 mL) enikezelwa kubantu abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu.
Idosi enye ye-Janssen COVID-19 ye-booster yedosi (0.5 mL) inokunikezelwa ubuncinane kwiinyanga ezi-2 emva kogonyo lokuqala kubantu abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu.
Idosi enye ye-booster ye-Janssen COVID-19 Vaccine (0.5 mL) inokunikezelwa kubantu abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu njengedosi ye-booster ye-heterologous emva kokugqitywa kogonyo oluphambili ngogonyo olugunyazisiweyo okanye oluvunyiweyo lwe-COVID-19. Ixesha lokudosa ledosi ye-booster ye-heterologous iyafana naleyo igunyazisiweyo yedosi ye-booster yesitofu sokugonya esisetyenziselwa ugonyo lokuqala.
IINKCUKACHA EZIBALULEKILEYO ZOKHUSELEKO
xelela umboneleli wogonyo malunga nazo zonke iimeko zakho zonyango, kubandakanywa ukuba:
naziphi na i-aleji
unesifo esophayo okanye unegazi elincinci
une-immunocompromised okanye ikwiyeza elichaphazela amajoni akho omzimba
ukhulelwe okanye ucwangcise ukukhulelwa
Ndifumene olunye ugonyo lwe-COVID-19
ukhe wafa isiqaqa ngokudibana nenaliti
Akufanele ufumane i-Janssen COVID-19 Vaccine ukuba:
waba negalelo elibukhali emva kwethamo langaphambili lonyango
waba negazi xa kukho nasiphi na isithako yeli chiza.
I-Janssen COVID-19 Vaccine iya kunikwa wena njengesitofu esihlunwini.
Ugonyo olusisiseko: Ugonyo lwe-Janssen COVID-19 lulawulwa njengedosi enye.
Idosi enye ye-booster ye-Janssen COVID-19 Vaccine inokulawulwa ubuncinci kwiinyanga ezimbini emva kogonyo olusisiseko lwe-Janssen COVID-19 Vaccine.
Idosi enye ye-booster ye-Janssen COVID-19 Vaccine inokunikezelwa kubantu abaneminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu abagqibe ugonyo olusisiseko ngogonyo olwahlukileyo olugunyazisiweyo okanye oluvunyiweyo lwe-COVID-19. Nceda uqhagamshelane nomboneleli wakho wezempilo malunga nexesha ledosi ye-booster.
Iziphumo ezichazwe ngeJanssen COVID-19 Vaccine zibandakanya:
Ukuphendula kwendawo yenaliti: iintlungu, ukuba bomvu kolusu kunye nokudumba.
Iziphumo ebezingalindelekanga ngokubanzi: intloko ebuhlungu, uziva udiniwe kakhulu, iintlungu zemisipha, isicaphucaphu, umkhuhlane.
I-lymph nodes ezidumbileyo.
Imvakalelo engaqhelekanga kulusu (njengokuntywila okanye ukurhubuluza) (paresthesia), ukuncipha kwemvakalelo okanye ubuntununtunu, ngakumbi kulusu (hypoesthesia).
Ukukhala okungapheliyo ezindlebeni (tinnitus).
Kukho ithuba elikude lokuba iJanssen COVID-19 Vaccine inokubangela ukusabela okungafunekiyo. Ukusabela okugwenxa kakhulu kunokuhlala kwenzeka kwimizuzu embalwa ukuya kwiyure enye emva kokufumana idosi yeJanssen COVID-19 Vaccine. Ngesi sizathu, umboneleli wakho wogonyo unokukucela ukuba uhlale kuloo ndawo ufumene kuyo isitofu sakho sokugada emva kokugonywa. Iimpawu zokungaziphathi kakuhle kunokubandakanya:
Ukudumba kobuso bakho nomqala
Ukubetha kwentliziyo okukhawulezayo
Irhashalala elibi emzimbeni wakho wonke
Ukuba nesiyezi nokuba buthathaka
Amahlwili egazi anamanqanaba asezantsi eePlatelets
Amahlwili egazi abandakanya imithambo yegazi kwingqondo, emiphungeni, esiswini, nasemilenzeni kunye neeplatelets ezisezantsi (iiseli zegazi ezinceda umzimba wakho uyeke ukopha), zenzekile kwabanye abantu abafumene iJanssen COVID-19 Vaccine. Kubantu abaphuhlise la mahlule egazi kunye namanqanaba asezantsi eeplatelets, iimpawu zaqala malunga neveki-ezimbini emva kogonyo. Ukuxelwa kwala mahlule egazi kunye namanqanaba asezantsi eeplatelets kuye kwaba phezulu kakhulu kwabasetyhini abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-49. Ithuba lokuba oku kwenzeke lide. Kuya kufuneka uye kwagqirha kwangoko ukuba unayo nayiphi na kwezi mpawu zilandelayo emva kokufumana isitofu iJanssen COVID-19
Iintlungu eziqhubekayo zesisu,
Intloko ebuhlungu okanye eqhubekayo okanye umbono ophazamisekileyo,
Ukutyumza ngokulula okanye iindawo ezincinci zegazi phantsi kolusu ngaphaya kwendawo yenaliti.
Ezi ayinakuba ziziphumo ebezingalindelekanga zeJanssen COVID-19 Vaccine. Iziphumo ezinzima nezingalindelekanga zinokwenzeka. Isitofu iJanssen COVID-19 sisafundwa kuvavanyo lweklinikhi.
Isifo sikaGuillain Barré
Isifo sikaGuillain Barré (ukuphazamiseka kwemithambo-luvo apho amajoni omzimba onakalisa iiseli zemithambo-luvo, ebangela ubuthathaka bemisipha kwaye ngamanye amaxesha ukukhubazeka) kwenzeke kwabanye abantu abafumene i-Janssen COVID-19 Vaccine. Uninzi lwaba bantu, iimpawu zaqala kwisithuba seentsuku ezingama-42 emva kokufunyanwa kweJanssen COVID-19 Vaccine. Ithuba lokuba oku kwenzeke liphantsi kakhulu. Kuya kufuneka uye kwangoko kunyango ukuba uvela kwezi mpawu zilandelayo emva kokufumana i-Janssen COVID-19 Vaccine:
Ubuthathaka okanye ukuntyiloza kweemvakalelo, ngakumbi emilenzeni okanye ezingalweni, eziya zisiba mbi kwaye zinwenwele kwamanye amalungu omzimba.
Ubunzima bokunyakaza kobuso, kubandakanya ukuthetha, ukuhlafuna, okanye ukuginya.
Ukubona kabini okanye ukungakwazi ukuhambisa amehlo.
Ubunzima bokulawula isinyi okanye ukusebenza kwamathumbu.
UThomas Lash uthi:
NgoDisemba 9, 2021 kwi-06: 09
Le mveliso ngokuqinisekileyo inezilumkiso ezininzi kunye nezenzo ezibi. Iphantse yakhuseleka njengo-Alex Baldwin kwiseti yeemuvi. Ngenene ndinqwenela ukuba bangayeka ezi zitofu kwaye bafumane eyona nyani, ikhuselekileyo, ibhayoloji esebenzayo enyanga intsholongwane okanye nayiphi na intsholongwane njengoko kuya kuba kuninzi kum kwezi zixhobo ze-bio.